Kuuriyada Koonfureed - BBC News Somali
Posted at 18:00 27 Nofembar 202118:00 27 Nofembar 2021
Posted at 6:24 19 Oktoobar 20216:24 19 Oktoobar 2021
Ma dhammeysatay filimka Squid Game? Halkan waxaan ku eegeynaa xog ku saabsan filimada muhiimka ah ee Kuuriya.
Posted at 16:18 13 Oktoobar 202116:18 13 Oktoobar 2021
Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi ayaa wacad ku maray inuu dhisi doono "ciidan aan muuqan" oo ka hortagaya siyaasadaha colayntinka ah ee Maraykanka kaga imanaya dalkiisa, sidaana waxa ku warantay warbaahinta dawaladda.
Posted at 18:51 5 Oktoobar 202118:51 5 Oktoobar 2021
Filimkii laga sameeyay 'Ka baxsashadii Muqdisho ee 1991' oo u tartamaya billad caalami ah
Filimkan waxa uu ku saabsan yahay sida ay diblomaasiyiintii labada Kuuriya uga baxsadeen Muqdisho markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Posted at 17:16 2 Oktoobar 202117:16 2 Oktoobar 2021
Wax ka ogaw hubka ay Kuuriyada Waqooyi u sameysatay Mareykanka dartii
Dhawaan tallaabadii ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabisay hubka waxay muujineysaa inay qorsheyneyso sidii ay usii xoojin laheyd hubkeeda.
Posted at 18:23 29 Sebtembar 202118:23 29 Sebtembar 2021
Kim Jong-un walaashiis oo soo dirtay farriin lama filaan ah
Kim Yo-jong waxay ka jawaabeysay baaq la cusbooneysiiyay oo uga yimid dhinaca Kuuriyada Koonfureed.
Posted at 16:21 10 Sebtembar 202116:21 10 Sebtembar 2021
Posted at 18:34 5 Agoosto 202118:34 5 Agoosto 2021
Maalmahan waxaa si weyn loo hadal hayay filim laga sameeyay xaaladdii diblomaasiyiinta labada Kuuriya ku qabsatay Muqdisho markii uu qarxay dagaalkii Sokeeye 1091-kii. Safiirkii Kuuriya u fadhiyay Soomaaliya ayaa ka sheekeynaya qisadii dhabta ahayd.
Posted at 13:30 23 Febraayo 202113:30 23 Febraayo 2021
Ciidamo loo haysto inay il-duufeen arrin xasaasi ah
Ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin wax looga baddalayo howlgalka ciidamada ee aaggaas.